Daawo: Ra’isul wasaare ku xigeen mahdi guulled oo maanta ka qeyb galay daah furka barnaamijka…. | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Ra’isul wasaare ku xigeen mahdi guulled oo maanta ka qeyb galay daah furka barnaamijka….
Wednesday August 9, 2017 - 1:27 under Somali News by Tifaftiraha K24
Muqdisho, August 9, 2017…..Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu daah furayay barnaamij loogu magacdaray hab xisaabeedka Cusub ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Hoose ee Xamar.
Waxaa ka soo qayb galay Safiiro, xubno ka socday Golaha Wasiirada, Xeer ilaaliyaha Qaranka, Hanti dhowraha guud, ku xigeenka madaxa Bankiga dhaxe iyo shaqaalaha gobolka Banaadir, waxaana si wayn looga dooday faa’iidooyinka laga dhaxli karo in bulshada loo soo bandhigo waxqabadka Dawladda.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo si wayn u amaanay madaxdii soo qaban qaabisay kulan ka isla xisaabtanka furan ayaa sheegay inuu ku faraxsanahay ka qaybgalka barnaamijkan kaa soo lagu soo bandhigayay dakhliga soo gala gobolka iyo meelaha lagu bixiyo, si shacabka loogu sheego adeegyada loogu qabto miisaaniyad lacageedka gobolka Banaadir. Wuxuuna tilmaamay in uu yahay mid ku dayasho mudan.
“Barnaamij kan wuxuu ka turjumayaa in bulshada gobolka Banaadir loo cadeeyo dakhliga soo gala maamulka, sidoo kalena waxuu kalsooni u abuurayaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool Muqdisho” ayuu yiri ku xigeenka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Khadar ayaa iftiimayay in dawladdu ay diyaar u tahay in ay shacabku la xisaabtamaaan si loo yareeyo musuq maasuqa, sidoo kale waxuu tilmaamay in xukuumadu ay dardargalinayso sharuuc dhowr ah kuwaa soo ka qayb qaadanaya dib u soo celinta hanaankii dawladnimo oo ay ka mid ahaayeen in la maxkamadeeyo mas’uulkii lunsada hanti Qaran.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in ujeedka kulan kan uu yahay sidii loo bari lahaa shacabka Muqdisho in ay ogaadeen dakhliga soo gala gobolka iyo goobaha lagu kharash gareeyo, uguna kalsoonaadaan dawladooda, ka dibna ay uga qayb qaataan shaqada qaranka. Ganacsatada iyo bulshada kalana ay u bixiso canshuurta ku waajibtay iyagoo dareensan waxyaabaha loogu qabanayo.